एमाले निकट प्रवासी नेपाली मंच साउदीका केन्द्रिय सदस्य खरेलको उपचारको क्रममा निधन। - Malayakhabar
होम पेज फिचर एमाले निकट प्रवासी नेपाली मंच साउदीका केन्द्रिय सदस्य खरेलको उपचारको क्रममा निधन।
एमाले निकट प्रवासी नेपाली मंच साउदीका केन्द्रिय सदस्य खरेलको उपचारको क्रममा निधन।
[ पिटिअन्लाईन संवाददाता ]
साउदी अरेबिया := साउदी अरेबियामा व्यावसाय गर्दै आईरहेका नेपाली ब्वावसायी ,नेकपा एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मंच साउदी अरबका केन्द्रिय कमिटीको सदस्य, श्रमिक समस्या विभाग तथा राजदुतावास समन्वय प्रमुख , सचिवालय सदस्य तथा सामाजिक अभियानमा सक्रिय कमल प्रसाद खरेलको उपचारको क्रममा निधन भएको छ।
झापा घर भएका खरेलको केही महिना पहिला नेपालमा क्यान्सरको अप्रेसन गरेका थिए। अप्रेसन सफल पछि सकुशल साउदी आई म्यानपावर ब्यबसायमा सक्रिय रहेका उनको केही दिन पहिला क्यान्सर बल्झेर विरामी भएका थिए। उनी बिरामी परेपछि साथीहरुले उपचारको लागि दम्माम स्थिति सेन्टल अस्पताल लगेका थियोे। उपचारत अवस्थामा अस्पतालमा बिहिवार ( जनवरी ६ तारिक ) खरेलको निधन भएको प्रवासी नेपाली मंच साउदी अरेबियाले जनाएको छ।
खरेल विरामी भएपछि उपचारको लागि नेपाल पठाउन राजदूतावास ,एनआरएनए ,प्रवासी नेपाली मंचले सक्दो प्रयास गरेका थिए। उनको कपिल सम्पर्कमा नआउदा केही दिन ढिला हुन गएको र नेपाल जाने वातावरण बनेकै दिन खरेलको दु:खद निधन भएको भाबुक हुँदै प्रवासी नेपाली मंच साउदीका अध्यक्ष अम्मर श्रेष्ठले पिटि अनलाईनलाई बताउनुभयो।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा सक्रिय रहेको खरेलले गत डिसेम्बर २७ मा कुनै सन्दर्भमा “यती सम्म वाक्क भइयो कि, फर्केर पनि हेर्दिन होला अब !!” भनेर पोस्ट गर्नु भएको थियो। उहाँको जीवनमा तेस्तै संयोग भयो ,उहाँ अब कहिले फर्केर नहेर्ने हुनु भएको छ।
सामाजिक अभियान तथा नेपाली समुदायमा चिरपरिचित खरेलको निधनमा साउदीमा क्रियासिल संघसंगठन र तिनका प्रतिनिधिहरु तथा नेपालीहरुले दु:ख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्।
अघिल्लो लेख सु.प. नेपाली समाज जोहोरको आयोजनामा भलिबल खेल प्रतियोगिता हुने।
पछिल्लो लेख देउवा गठबन्धनको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैन: केपी ओली।